"N'ugwu ara ara." Ihe ojoo site n'aka Lovecraft. | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
"N'ugwu ara ara." Ihe ojoo site n'aka Lovecraft.
M. Scabies | | oké ụjọ
Mmanụ nke Nicholas Roerich, otu n'ime ọtụtụ ndị kpaliri mmụọ nsọ N’ugwu ara ara.
Ọ bụ ihe ijuanya na onye edemede nke ogologo HP crafthụnanya nwụrụ naanị ya na ịda ogbenye, ọ bụ ezie n'eziokwu na ọ bụ ihe nkiri nkịtị karịa ka ọ nwere ike iyi. Ọ dịghị onye amụma bụ n’ala ya ma ọ bụ, dị ka ọ dị, n’oge ya. Dika Lovecraft n’onwe ya siri kwue na ndu na “nwa amadi anaghi anwa ime ka amara ya, o hapu ya nye ndi oru aka ya na ndi obere,” o doro anya na o bu onye aghugho. Strictkpụrụ omume ya siri ike (ma ọ bụ na-agụsi agụụ ike, dị ka ụfọdụ ndị na-ede akụkọ) si gbochie ya ịga nke ọma n'ahịa. Ọ bụ ezie na nsọpụrụ ya, okwu gaferela ugbu a ọbụna na mmalite nke narị afọ nke XNUMX, kwesịrị ịja mma. Site n'okwu onye ode akwụkwọ France bụ Michel Houellebecq: "N'oge a na-agba ara ka azụmahịa siri ike, ọ bụ ihe nkasi obi ịhụ onye jisiri isi ike jụ 'ire onwe ya'."
Ihe ndị na-akatọ onye na-ede Providence (onye anyị nwere ike ịkpọ Ursula K. Le Guin) ga-ekwenye bụ na kpebisiri ike na nka nke ọgbọ ndị na-abịa abịa. Akụkọ ọdịnala ya gafere pulp y ala ụzọ niile na omenala. Taa ọtụtụ ndị mmadụ maara, ma ọ dịkarịa ala site na nụ, Cthulhu dị ka Batman ma ọ bụ Frodo. Ihe mgbochi nke akụkọ akụkọ akụkọ Lovecraft na-abanye n'ọrụ dị iche iche dị ka ihe nkiri ahụ Onye ọbịa: onye njem nke asatọ nke Ridley Scott (1979), akwukwo ohuru Derbọchị Ezigbo: contdị adị site na SCA-JI (2010) ma obu egwu a furu efu in akpụrụ mmiri nke ìgwè Ọnụma (1993), nke na-enyocha ihe omume nke obere akwụkwọ N’ugwu ara ara. Ọ bụ kpọmkwem ọrụ a ka anyị ga-atụle.
Chineke bụ astronaut
Okirikiri ala ahụ chetaara m ụfọdụ ihe osise dị ịtụnanya na nke na-enye nsogbu site na eserese Asia nke Nicholas Roerich, na nkọwa na-eju anya ma na-enye nsogbu karịa banyere ajọ ala na oke ugwu nke Leng nke pụtara na 'Necronomicon' dị egwu, nke onye Arab Arab Abdul Alhazred. Emechara m nwee mwute na m gụrụ akwụkwọ ahụ dị egwu n'ọbá akwụkwọ mahadum.
Lovecraft ahụhụ si na obere okwu nke poikilothermia (enweghi ike ịchịkwa ọnọdụ ahụ n'adabereghị na ọnọdụ okpomọkụ), nke mere ka ọ daa ọrịa na ọnọdụ dị n'okpuru 20º, ọkachasị na njedebe nke ndụ ya. N'ihi nke a, ọ dị ịtụnanya na otu akụkọ kachasị mma ya na Antarctica, dịka a ga - asị na kọntinent ahụ nke aka Chineke hapụrụ mere ka ọ nwee mmasị na - adịghị mma.
Cover nke mbipụta nke Cátedra de N’ugwu ara ara.
Arụmụka nke N’ugwu ara ara bụ ụkpụrụ dị mfe: ọkà mmụta ala William akpa ọ na-agwa onye mbụ njem ya na otu ndị ọkà mmụta sayensị na Antarctica, na ihe egwu na-enweghị atụ nke ha na-achọpụta n'otu obodo, furu efu na ice, nke ahụ ekwesịghị ịdị. Akwụkwọ ọgụgụ dị nnọọ loosely sitere n'ike mmụọ nsọ site na Arthur Gordon Pym na-akọ akụkọnke Edgar Allan Poe dere. Enweghị otu mkparịta ụka n'etiti ibe ya, ikekwe n'ihi mkpebi mara mma, ma ọ bụ n'ihi na onye edemede ahụ n'onwe ya maara na ya enweghị ike ide mkparịta ụka ziri ezi (dị ka Stephen King gosipụtara na edemede ya Mgbe m na-ede). N'ọnọdụ ọ bụla, Lovecraft na-eji ụmụ mmadụ dịka ihe eji eme ihe iji kọọ akụkọ dịkarịa ala, ma dị egwu karịa mmadụ n'onwe ya.
Ọbara ya na-agbafe na akwara m
Otú ọ dị, nku ahụ siri ọnwụ na-atụ aro ọnọdụ ikuku ya. […] Ọ bụ ya bụ ihe a na - enweghị nghọta na echetara m n'ọdụ ụgbọ mmiri Lake nke akụkọ ifo banyere ndị ochie ahụ sitere na kpakpando wee mepụta ndụ ala site na njakịrị ma ọ bụ mmeghe, yana akụkọ nzuzu banyere ndị mmadụ si n'èzí ndị bi n'ugwu, site na nke onye nkuzi ọdịnala ibe ya si na Ngalaba Asụsụ Bekee nke Miskatonic kwuru.
Akwụkwọ a abụghị akụkọ ụjọ, n'ụdị ọdịnala ndị Gothic nke mmụọ na vampires, mana akụkọ banyere ihe ojoo nke ahụ na-enyocha otú anyị si bụrụ ndị na-abaghị uru n'etiti mbara igwe. Na-atụ ụjọ nke N’ugwu ara ara ọ bụ ọdịdị ya dị ka akụkọ sayensị na-egosi ọmịiko ("glacier nọ na 86º 7" latitude na 174′ 23 "ọwụwa anyanwụ" ma ọ bụ "pyramid ahụ dị 15 m site na 5 m ogologo"). Dị ka a ga-asị na ọ mere n'ezie. N’ụzọ dị iche iche, iji usoro okwu eji eme ihe eji eme ihe nke Lovecraft na-enweta mmetụta uri dị ike.
N'ịkọwapụta n'okwu metụtara okwu ahụ, onye edemede na-eji ihe niile a ghọtara dị ka njehie nke ndị mbido (ịkọwa okwu na okwu nkọwa, iji okwu ochie ma ọ bụ okwu ndị ọzọ, wdg), nke ọ na-eme nke ya ma na-efe dị ka ọkọlọtọ. Nke a na-eme ka ederede nwere agwa nke oma, karịa nkọwa. Maka Lovecraft, ụlọ nsọ abụghị nnukwuma ọ bụ buru ibu, ma ọ bụrụ na ọ bụghị cyclopean y megalithic. Nke sụgharịrị ịbụ ụdị anachrony na enweghị isi na-emetụta ọnọdụ onye na-agụ ya ka akụkọ a na-aga n’ihu.
I nwere ike ikwu ogologo oge N’ugwu ara araMa zuru ya ikwu na ọ bụ mpempe isi nkuku nke narị afọ nke XNUMX nke akwụkwọ sayensị na akwụkwọ egwu. Ọtụtụ n'ime ihe ndị anyị na-agụ taa sitere na akwụkwọ akụkọ a. Ikekwe, n'ọdịnihu dị nso, ọ ga-abụ n'egbugbere ọnụ nke ọha na eze, ebe ọ bụ na onye nduzi a ma ama Guillermo del Toro (onye meriri ọtụtụ Oscars maka Dị mmiri) anọwo na-achụgharị maka echiche nke otu fim maka ọtụtụ afọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » oké ụjọ » "N'ugwu ara ara." Ihe ojoo site n'aka Lovecraft.
Miguel Delibes. Afọ 8 mgbe ọ nwụsịrị. Fọdụ nkebi ahịrịokwu na ebe nchekwa ya.
Ajụjụ ọnụ nke Roberto Martínez Guzmán, onye edemede nke usoro ojii nke Eva Santiago dere.